Baroor-diiq maanta loo sameeyey askarigii Göteborg shalay baabuurka ku jiiray | Somaliska
Askariga reer Göteborg Per Nattvide Per, oo da’diisu aheyd 43 jir ayaa maalintii shalay aheyd waxaa uu naftiisa ku waayey isagoo eryayana tuug soo socday dukaan yar oo ku yaala bariga Göteborg.
Wuxuu muddo 18 sanno ah ku shaqeeynayey meherada askarinimo, waxaana uu dhintay isagoo howl ammaan sugid gacanta ku haya. Maanta ayaa hadaba 12-kii duhurnimo waxaa magaaladda Göteborg ciidanka ammaanka ka howlgala ay iskugu soo baxeen fagaaraha Gustaf Adolfs torg, halkaas oo ay baroor-diiq ugu iyo daqiiqad aamus ah u sameeyeen saaxiibkood oo shil kam ah ku dhintay. “Waa mid aad u culus marka saaxiib naga mid ahi uu naga baxo nuguna reebeeysa xasuus murugo leh” ayuu yiri madaxa booliska gobolka Göteborg Erik Nord oo warbaahinta la hadlay qadar yar. Wuxuu sheegay in maanta dalka oo dhan daqiiq aamus ah looga sameeyey ayna aheyd go’aan qaran oo lugu maamusayey askariga dalkiisa u shaqeeynayey.
Dhinaca kale hooyada dhashay askariga geeriyooday ayaa iyadoo ka warameeysa wiilkeeda sheegtay inuu ahaa shaqsi fur furan oo cid kasta jeclaaneeyso. Waxeey tiri “Waxeey aheyd goor fiid ah oo habeenimo axad ah, waxaan aniga iyo ninkaan la daganahay lugeeyneyna na agmaray baabuur boolis ah oo gurigeyga dhiniciisa u leexday. Maanta gelinkii hore ayaan is dirirnay ninka baarkeerin-nada waardiiyey.
Booliska ayaa ii yimid oo iga codsaday inaan fariisto, waxaan u qaatay ineey sheekada buun buuninayaan, markaa ayey igu yiraahdeen wiilkaagii ayaa naga baxay. Waxaan u qaatay warkooda been waana runsan waayey malaha waxaan is iriqof kale ayey aqoonsigiisa ku qaldayaan. Qof sidan u faraxsan inuu meesha ka baxayo si deg deg ah ilama aheyn” ayey tiri Hildegard Krebbs oo aheyd hooyadii dhashay askarigii reer Göteborg ee shalay baabuurka dilay isagoo ereyeynayey mid ka mid ah afar nin oo dukaan soo dhacay iyadoo u warameeysay warfidiyeenadda. Geerida askariga ayaa maanta guud ahaan laga dareemeyey magaaladda Göteborg, waxaana hoos loo dhigay calanka dalka Iswiidhan.